महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै कांग्रेसमा विवाद चर्किदै महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै कांग्रेसमा विवाद चर्किदै - Akhabar Nepal
महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै...
महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै कांग्रेसमा विवाद चर्किदै
२०७७, १५ श्रावण बिहीबार ०९:४३
काठमाडौं: नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै विवाद पनि चर्किदै गएको छ ।
महाधिवेशनको मिति तय भएर काम अगाडि बढिरहेका बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले धमाधम विभाग गठन तथा मनोनय गरेपछि असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाउने तयारी गरेको छ ।
बिहीबार वरिष्ठ नेता पौडेलको नेतृत्वमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासहितका नेताहरुले सभापति देउवालाई भेटेर असन्तुष्टि जनाउने भएका छन् । ‘आगामी महाधिवेशन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउने विषयमा छलफल गर्न हामी पार्टी कार्यालय सानेपा जाँदैछौं,’ कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भने ।
बुधबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा भएको पौडेल समूहले सभापति देउवालाई भेटेरै आफ्नो असन्तुष्टि सुनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सितादेवी यादवले पार्टीको निर्वाचन समितिमा लिखित उजुरी दिएका थिए ।
तोकिएको मितिमा पनि महाधिवेशन नहुने हो की भन्ने आशंकमा पौडेल समूह छ । त्यतिमात्र होइन पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणदेखि नै सभापति देउवा पार्टी कब्जा गर्ने गरि अगाडि बढेको आरोप पौडेल समूहको छ ।